I-China Archery Broadhead Hunting MIM kunye neFektri | Kelu
Ukutsala kwe-Archery Broadhead MIM
UKUHLAZIYA I-100 ingqolowa I-125 ingqolowa I-150 ingqolowa I-225 ingqolowa Isiko
UMSEBENZI I-2 ingqolowa
HARDNESS I-HRC 44 ~ 46 I-HRC 50-52 Isiko
IZENZO: I-titanium, intsimbi engenasiseko
AMANZI: IiBhlawu ezimbini, iiBhloko ezintathu
ITYHULA: Ingcezu enye MIM
COAT: Ukucwangcisa, iPVD okanye isiko
I-KELU inobuchule kwi-MIM kunye ne-CNC eyilungele ngokufanelekileyo isixhobo sokuzingela kunye nezinto zokukhangela.
Kwabanzi, sivelisa into ebanzi ibe yindawo enye kunye nokudityaniswa okubanzi, isebenzise iTitanium okanye iStainless okanye iTungsten ekubumbeni okanye kwimatshini ebanzi ebanzi engasasetyenzwanga okanye ukufakraza iirure, amabala kunye nezikere zokuhlangana.
Iintloko zibanzi zonke ziveliswa kwaye zilawulwa liqela le-KELU ngokusebenza kakuhle, kugxininiso, ngokuthe tye, ukunyamezeleka kwesisindo, ubukhali nazo zonke iinkcukacha.
Ububanzi bokwenza ngokwezifiso kwamkelekile, i-KELU yenza uyilo lwakho lube yinyaniso.
Edlulileyo: Iibhanti zokuloba eziTungsten
I-150 yeGrain Broadhead
Amanqaku okutsala kweentolo
Inxalenye enye ebanzi
Ivenkile ebanzi ethengiswayo
Ukutsala kwe-Archery Broadhead Ukuzingela i-CNC